Ny herinandron’ny 19/01/2006 tao amin’ny blaogy Nizeriàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2019 13:37 GMT
(Fanamarihana. lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2006)
Azoko antoka fa na iza na iza namorona an’ity fehezanteny manaraka ity: “Tontolon-dry zareo lehilahy io” dia tsy maintsy nivadibadika any ampasany any noho ny lahatsoratr'i Olaniyi David Ajao mitondra ny lohateny hoe: “Ireo vehivavy filoham-panjakana“.
“Tsy maintsy mivanitika hatrany ampoto-tsofiny ireo mpikatroka ho an'ny zon'ireo vehivavy.” Hoy izy, “Tamin'ireo herinandro farany, onja iray vaovao no niparitaka manerana ny tontolo politika erantany raha toa ka marobe ireo vehivavy no nitàna an'ireo andraikitra teo amin'ny fitondrana. Androany, filoham-panjakana iray vaovao no nianiana tao Liberia, firenena Afrikana Tandrefana. Izy no vehivavy Afrikana voalohany voafidy ara-demokratika ho filoham-panjakana. Ramatoa Ellen Johnson-Sirleaf no resahiko. Mbola io omaly io ihany, nofidian’ ny vahoakan'i Shily ho filoham-pireneny Ramatoa Michelle Bachelet…”
Tanisain'ny lahatsorany ihany koa Ramatoa Chancellière Angela Merkel, sy ny Filoha Lefitra Afrikana Atsimo Phumzile Mlambo-Ngcuka ho isan'ireo vehivavy hafa mpitarika ara-politika.
Mbola mikasika an'ireo Nizeriàna fa any anatin'ny Diaspora, Yesi ao amin'ny “NTEX” miady hevitra amin'ny fikarohana ifandrimbonana nataon'ny Profesora Wole Soboyebo, Nizeriàna iray mpampianatra amin'ny anjerimanontolo ao Princeton. Naharay fehezana fanampiana avy amin'ny National Science Foundation ao Etazonia ilay mpampianatra mba “hananganna fifandraisana eo amin'ireo afrikana sy amerikana matihanina, hampiroboroboana ny toerana iray famokarana ao Afrika izay hahafahan'ilay tanibe handray anjara anatina fifanakalozana iray mampidi-bola kokoa ao anatin'ny tsena erantany…”
Orikinla avy ao amin'ny Nigerian Times dia faly noho ny fanirian'ny Sinoa hampiasa vola ao anatin'ny sehatra solika sy entona amin'ny toekarena nizeriàna. Ireo blaogera Nizeriana hafa tsy dia marisika loatra amin'ny fifanarahana 2,3 miliara dolara. Sokari ao amin'ny Black Looks, milaza fa: “… raha tsara avy amin'ireo zava-misy voarakitramomba an'i Shina eo amin'ny lafiny fanajana ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana ao Shina sy zavabitany tao Sodàna, manahy aho fa ho kely ny zavatra hiova amin'ireo mponina ao Deltan'i Niger ary mety vao mainka hiharatsy azy aza izany.”
I Chippla, iray tsy dia matoky shinoa, izay nametraka mazava tsara hatrany ny fijeriny mikasika an'ireo fifanakalozana ara-barotra sinoa sy nizeriana, dia toa somary voasarika kely ihany amin'ilay politika vaovao Shina-Afrika naboraka, tamin'ny nanambarany hoe: “Mety hisy zavatra iray vaovao hivoaka avy ao anatin'ilay politika Shina-Afrika…”
“Ny fandrosoan'i Afrika tamin'ny taonjato faha-20 dia hita ho tena misy fifamatorany saro-bahana amin'ny an'i Shina”. Manome hevitra izy eo amin'ny blaoginy hoe: ” Ao anatin'ny fankahalàn'io mpanoratra io ny zava-misy atao hoe ireo firenena afrikana ireo dia tsy atao afa-tsy mpanondrana akora fototra fotsiny, mety hisy zava-baovao hivoaka amin'ny politika an'i Shina-Afrika. Ohatra amin'izany, resahan'izy io ny fiarahamiasa ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana ary koa ny fiarahamiasa ara-tsiantifika sy teknolojika. Amin'izao fotoana izao, zavatra iray tena mahaliana an'ity mpanoratra ity … ny fiarahamiasa ara-tsiantifika sy ny teknolojika. Satria raha tsy misy firenena Afrikana vitsivitsy manomboka tsy manondrana afa-tsy ireo “akora fototra” tsotra mankany Shina, mbola hijanona ho olana hatrany ny tsy fahatokisana sy ny fahamalinana.”
Emeka ao amin'ny “Timbuktu Chronicles” manolotra ny nizeriana mpandraharaha iray izay nahita ny hirika-ny tamin'ny fanafoanana an'ireo fako ataon'ny olombelona. Ny “DMT Mobile Toilets dia mpisava lalana eo amin'ny sehatry ny fanafoanana an'ireo fako ataon'olombelona. Ny haron'izy ireo vokarina ao an-toerana dia “… FANENTSENANA NY FILANA IRAY MATOTRA… Natosiky ny fahafantarana fa misy 500 fara-fahakeliny ireo toeram-pidiovana afaka miasa ho an'ny daholobe ao Nizeria ary ratsy karakara ny ankamaroan'ireo toeram-pidiovana ireo sady tsy ampy. Amina mponina manodidina ny dimampolo amby zato tapitrisa (150 000 000), nanomboka nanoritra ny lalany tao anatin'ny tontolon'ireo toeram-pidiovana ho an'ny daholobe ilay orinasa… “
Ny fanamelohana Nizeriana iray higadra 376 taona noho ny fanaovana hosoka taminà fandoavam-bola mialoha dia anisan'ny iray tamin'ireo fanadihadiana navoaka tao amin'ny “Ireo Vaovao avy ao Nizeria” an'i Chidi Ezeibe
Nilaza i Chidi hoe: “Tamin'ny faran'ny herinandro, nifankahita tamina nizeriana iray 32 taona, Atoa Harrison Odiawa, i NEMESIS. Nohelohina higadra 376 taona izy io ,tsy azo soloina sazy vola, noho ny hosoka nataony tamina Amerikana iray, M. George Robert Blick… “Tamin'ny fotoana nilazàna ilay fitaka tany tamin'ny FBI, nahazo vola 2 tapitrisa mahery avy amin'i Blick i Odiawa”.
Tao anatin'ny lahatsoratra iray vao haingana mitondra ny lohateny hoe: “miaro an'ireo mpiasa amin'ny sehatra solika nalaina ankeriny i Obasanjo“, soratan'i Chidi ny momba ireo korontana nisy tao amin'ny faritry ny Deltan'i Niger, manankarena ara-tsolika, ao Nizeria.
“Nanao fivoriana iray fanapahankevitra i Obasanjo omaly niaraka tamin'ireo mpitarika ara-politika sy ara-tafika ao amin'ny firenena momba ny loza mitatao amin'ireo fotodrafitrasa momba ny solika ao amin'ny Deltan'i Niger, tao amin'ny Toeram-ponenan'ny Filoha, ao Abuja. Natsangan'izy ireo ny komity iray hiantoka ny famotsorana malaky ireo mpiasan'ny solika nisy naka ankeriny. Ny Filoha Obasanjo, izay nitarika ny fivoriana, no niantso an'ireo mpaka ankeriny” mba tsy hanao na inona na inona ka mety hitarika fahafatesana…”
“Mba ho fankasitrahana ny anjara toerana lehibe noraisin'ireo blaogy nizeriàna tamin'ny taona 2005, namorona ny Nigerian Weblog Awards 2005 ny tariky ny Naijarita News mba hanomezam-boninahitra an'ireo blaogera miavaka avy ao Nizeria. Afaka ny hino ve ianao fa efa manana blaogy 132 izahay ato amina firenena iray misy mponina 120 tapitrisa monja? Moa tsy mahazendana ve…” Trandraho iza no nahazo inona!